Mote Poh - BecomeaBrand Partner
[Zawgyi] မုန့်ဖိုး က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ၀န်ထမ်းအကျိုးခံစားခွင့်အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့က လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို လစဉ်လတိုင်း လစာထုတ်ရက်တွေမှာ အကျိုးခံစားခွင့်တွေရရှိပြီး ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေဖို့ကူညီပေးနေသလို တစ်ဖက်မှာလည်း ပြည်တွင်းအမှတ်တံဆိပ်တွေကို ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ဖို့ အထောက်အပံ့ပေးနေပါတယ်။ လူကြီးမင်းက အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင် များ၏ ပိုင်ရှင် (သို့) မန်နေဂျာ (သို့) ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုပွဲများရဲ့ စီစဉ်သူ တစ်ဦး ဖြစ်လျှင် အောက်တွင်ပေးထားတဲ့ ဖောင်ကို ဖြည့်စေလိုပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ သိလိုသည့် သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်။ မုန့်ဖိုးနှင့်အတူရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ လူကြီးမင်းတို့ဆီမှ သတင်းစကားများကို မျှော်လင့်နေပါတယ်။
[Unicode] မုနျ့ဖိုး က မွနျမာနိုငျငံမှာ ပထမဆုံး ဝနျထမျးအကြိုးခံစားခှငျ့အစီအစဉျတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျုပျတို့က လူကွီးမငျးတို့ရဲ့ ဝနျထမျးတှကေို လစဉျလတိုငျး လစာထုတျရကျတှမှော အကြိုးခံစားခှငျ့တှရေရှိပွီး ကနြေပျပြျောရှငျစဖေို့ကူညီပေးနသေလို တဈဖကျမှာလညျး ပွညျတှငျးအမှတျတံဆိပျတှကေို စြေးကှကျဖျောဆောငျဖို့ အထောကျအပံ့ပေးနပေါတယျ။ လူကွီးမငျးက အသုံးအဆောငျပစ်စညျးဆိုငျ၊ စားသောကျဆိုငျ မြား၏ ပိုငျရှငျ (သို့) မနျနဂြော (သို့) ပွညျတှငျးလှုပျရှားမှုပှဲမြားရဲ့ စီစဉျသူ တဈဦး ဖွဈလြှငျ အောကျတှငျပေးထားတဲ့ ဖောငျကို ဖွညျ့စလေိုပါတယျ။ လူကွီးမငျးတို့ သိလိုသညျ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားအတှကျ ကြှနျုပျတို့ဘကျမှ ဆကျသှယျပေးပါမယျ။ မုနျ့ဖိုးနှငျ့အတူရှဆေ့ကျလုပျဆောငျဖို့ လူကွီးမငျးတို့ဆီမှ သတငျးစကားမြားကို မြှျောလငျ့နပေါတယျ။
[English] Mote Poh (မုနျ့ဖိုး) is Myanmar's leading employee benefits program. We help companies surprise and delight their employees every payday, and we help local brands build recognition and acquire new customers. If you own or managerashop, restaurant or activity in Myanmar, please fill out the form below, and we'll contact you with more information. We look forward to hearing from you.
နာမည် / နာမညျ / Name *
ဖုန်းနံပါတ် / ဖုနျးနံပါတျ / Telephone Number *
အီးမေးလ် / အီးမေးလျ / Email *
ကုမ္ပဏီ / ကုမ်ပဏီ / Company *
This form was created inside of Mote Poh. Report Abuse - Terms of Service